Wararka Suuqa Maanta: Xiisaha Haaland ee Manchester United, iyo Lingard, Lukaku, Christensen, De Vrij, Ndidi, McKennie, Ramsey, Pedri, Januzaj | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Xiisaha Haaland ee Manchester United, iyo Lingard, Lukaku, Christensen,...
Wararka Suuqa Maanta: Xiisaha Haaland ee Manchester United, iyo Lingard, Lukaku, Christensen, De Vrij, Ndidi, McKennie, Ramsey, Pedri, Januzaj
Newcastle ayaa Man United xidhiidh kala samaysay saxeexa Jesse Lingard oo ay suuqa January ka doonayaan. (Sun)
Manchester United ayaa dooratay afar weeraryahan oo ay midkood u dhaqaaqayso haddii Edinson Cavani kaga biiro Barcelona waxaana ay kala yihiin Erling Braut Haaland, Joao Felix, Timo Werner iyo Alexander Isak. (DailyMail)
Tottenham Hotspur ayaa Man United iyo City kula biirtay inay si dhaw ula socdaan xaalada daafaca Chelsea ee Andreas Christensen oo heshiiskiisa Stamford Bridge dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. (Daily Star)
Ajax tababaraheeda Erik ten Haag ayaa halka ugu sarreysa kasoo galay liiska macalimiinta lala xidhiidhinayo Man United oo tababare rasmi ah raadinaysa kaddib Ralf Rangnick oo ay qaab kumeel gaadh ah u magacaabeen. (Daily Mirror)
Liverpool ayaa da’yarka Real Madrid ee Rodrygo ka dhigatay mid kamida bar-tilmaameedyadeeda ugu muhiimsan xilli ay diyaar u yihiin inay dalab 68 Milyan oo pound ah ka gudbiyaan. (Daily Mirror)
Everton qorshayaasheedii suuqa January ayay macquul tahay inay isbedelaan kaddib markii wakiilka weeraryahan Anthony Martial uu sheegay in xiddigiisu ka tagi karo Manchester United. (Liverpool Echo)
Leicester City ayay u badantahay inaysan haysan lacag ay January kusoo xoojiso kooxdeeda suuqa Brendan Rodgers. (Leicester Mercury)
Chelsea weeraryahankeeda Romelu Lukaku waxa uu ku laaban doonaa Serie A kahor dhammaadka waayihiisa ciyaareed sida wakiilkiisu sheegay. (Goal)
Inter Milan ayaan wali wax wadahadalo heshiis kordhin ah la samayn Stefan de Vrij walow uu xiiso ka helayo Newcastle iyo Tottenham. (Gazzetta dello Sport)
Real Madrid ayaa khadka dhexe ee Leicester ee Wilfred Ndidi u dooratay bedelka Casemiro. (Naija)
Juventus ayaa suuqa January dhagaysan doonta dalabaadka u imanaya xiddigaha khadka dhexe ee Weston McKennie, Arthur iyo Aaron Ramsey. (Gazzetta dello Sport)
Brighton ayaa Man City, Liverpool iyo AC Milan ku garaacday saxeexa weeraryahanka Polish-ka ah ee Kacper Kozlowski oo 8 Milyan oo pound ugaga imanaya Pogon Szczecin. (DailyMail)
Barcelona ayaa bartilmaameed ka dhigan doonta Adnan Januzaj marka heshiiskiisa Real Sociedad dhaco xagaaga dambe. (DailyMail)
Barcelona ayaa weeraryahanka Man United ee Martial u dooratay bedelka Ferran Torres oo Man City ka tirsan haddii ay waayaan. (Sport)
Paris-St Germain weeraryahankeeda Mauro Icardi wakiilkiisa ahna xaaskiisa Wanda Nara ayaa Juventus la bilawday wadahadalo uu ugu soo laabanayo horyaalka Serie A. (Fichajes)
Pedri ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Barcelona walow uu xiiso ka helayo Manchester City. (Tuttosport)
DEG DEG: Hanti-dhawrka Qaranka oo go’aan culus kasoo saaray heshiisyada DF
Guusha Liverpool ka gaartay kooxda Aston Villa oo Xaqiiqooyin Cusub laga...
Kylian Mbappe oo barbareeyay rikoorka gooldhalinta Lionel Messi guushii Rennes.
Christian Eriksen oo Ku laabanaaya Tottenham Hotspur?
Pierre-Emerick Aubameyang oo tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Barcelona